Ny fampihorohoroana amin'ny fahavelomana dia miteraka resabe ao amin'ny tranofiara 'Hunted' an'i Shudder - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny fampihorohoroana amin'ny fahavelomana dia miteraka fandosirana ao amin'ny tranofiara 'Hunted' an'i Shudder
Ny fampihorohoroana amin'ny fahavelomana dia miteraka fandosirana ao amin'ny tranofiara 'Hunted' an'i Shudder
by Trey Hilburn III Janoary 11, 2021
nosoratan'i Trey Hilburn III Janoary 11, 2021
Ny tranofiara ho an'ny haza masiaka be mihitsy. Toa maka ny tantaran'ny Little Red Riding Hood izy io ary mamadika azy eo an-tsofiny. Ary arivo arivo isan-jato aho eto noho izany.
Talen'ny fahitana, Vincent Paronnaud no mitondra an'io ary mitondra zavatra manakaiky ny mahery fihetsika frantsay amin'ny sarimihetsika anglisy. Ny tena mahaliana, ity lehilahy ity koa dia mpamorona ilay sarimihetsika mahafinaritra, Persepolis.
Ny synopsis ho an'ny haza mandeha toy izao:
Ny zavatra natomboka tamin'ny fihaonana tamim-pitiavana tao amin'ny fisotroana dia nivadika tolona fiainana na fahafatesana toa an'i Eve (Lucie Debay) lasa lasibatra tsy fantatry ny teti-dratsy misogynistic hamelezana azy. Noterena handositra izy rehefa nanenjika azy namaky ny ala ny roa lahy, natosika hihoatra ny ainy izy rehefa niady mba ho tafavoaka velona tany an'efitra - saingy tsy ampy ho an'i Eva ny fahavelomana. Hanao valifaty izy.
haza Nahazo marika avo be avy amin'i Joe Bob Briggs herinandro maromaro lasa izay rehefa nirehareha tamin'ny alàlan'ny Twitter momba ny horonantsary iray izay tena nohadiny izay nilalao niaraka tamin'ny Little Red Riding Hood.
“Shudder dia mandatsaka am-boalohany ny faha-14 izay avy any Frantsa na Belzika na Irlanda – Tsy azoko fantarina – miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika mbola tsy reko mihitsy, izay azo faritana tsara ho toy ny Wolf-Creature Stalker Torture Porn, miaraka amina vehivavy iray. slant ary subplot velona. Tsara tarehy izy izany.”Briggs nisioka.
haza kintana Ireo mpilalao sarimihetsika Magritte Lucie Debay (Ny fieken-keloka) ary Arieh Worthalter (Tovovavy), miaraka amin'i Ciarán O'Brien manodinkodina ny mpilalao mpilalao akaiky
Ampahafantaro anay ny hevitrao momba ny tranofiara ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
haza dia ho tonga any Shudder ny 14 Janoary.
Kelly sy Pablo dia ho tonga any amin'ny Ratsy maty: ny lalao! Vakio bebe kokoa eto.
hazaPetit chaperon rougemangovitra
Ny angano an-tanandehibe mamorona indrindra amin'ireo firenena 50 Fizarana 9
Ny andian-tsarimihetsika Amazon 'Fantatro izay nataonao tamin'ny fahavaratra farany' dia nanambara ny fandefasana azy